2GB PST Ingxaki yeFayile. Ingxaki yeFayile yePST engaphezulu.
Ikhaya iimveliso DataNumen Outlook Repair Ingxaki yefayile yePST engaphezulu (ubungakanani befayile yePST ifikelela okanye idlula umda we-2GB).
Ulwazi oluneenkcukacha malunga neFayile yePST Ingxaki enkulu
Yintoni ingxaki yeFayile yePST engaphezulu?
IMicrosoft Outlook 2002 kunye neenguqulelo zangaphambili zinciphisa ubungakanani beFayile zobuqu (PST) kwi2GB. Nanini na xa ifayile ye-PST ifikelela okanye igqitha kulo mda, ngekhe ukwazi ukuyivula okanye uyilayishe kwakhona, okanye awunakongeza idatha entsha kuyo. Oku kubizwa ngokuba yingxaki yefayile yePST.
I-Outlook ayinandlela yakhelwe ukuhlangula ifayile ye-PST engaphaya engafikelelekiyo. Nangona kunjalo, iMicrosoft ibonelela ngesixhobo sangaphandle pst2gb njengendawo yokwenza izinto, enokubuyisela ifayile kwindawo enokusebenziseka. Kodwa ngamanye amaxesha, esi sixhobo siza kusilela ekubuyiseleni iifayile ezingaphezulu. Kwaye nokuba inkqubo yokubuyisela iyaphumelela, enye idatha iya kuncitshiswa kwaye lost ngokusisigxina.
IMicrosoft ikhuphe iipakethe ezininzi zeenkonzo ukuze xa ifayile yePST isondela kumda we-2GB, i-Outlook ayinakho ukongeza nayiphi na idatha entsha kuyo. Lo matshini, ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, unokuthintela ifayile yePST ekubeni ibe ngaphezulu. Kodwa nje ukuba umda ufikelelwe, awunakuyenza nayiphi na imisebenzi, njengokuthumela / ukufumana ii-imeyile, wenze amanqaku, usete amadinga, njl., Ngaphandle kokuba ususe idatha eninzi kwifayile ye-PST kwaye indawo yokudlala emva koko ukunciphisa ubungakanani bayo. Oku kunzima kakhulu xa idatha ye-Outlook ikhula inkulu kwaye inkulu.
Ukusukela kwiMicrosoft Outlook 2003, kusetyenziswa ifomathi entsha yePST yefomathi, exhasa i-Unicode kwaye ayinasiphelo somda we-2GB. Ke ngoko, ukuba usebenzisa iMicrosoft Outlook 2003 okanye 2007, kwaye ifayile ye-PST yenziwe kwifomathi entsha ye-Unicode, emva koko awuzukukhathazeka malunga nengxaki engaphezulu.
1. Xa uzama ukulayisha okanye ukufikelela kwifayile engaphezulu ye-PST ye-PST, uya kubona imiyalezo yempazamo, enje nge:
Kufunyenwe iimpazamo kwifayile ye-xxxx.pst. Yeka zonke izicelo ezenziwa ngeposi, emva koko usebenzise i-Inbox Repair Tool.
Apho i 'xxxx.pst' ligama lefayile ye-Outlook PST eza kulayishwa okanye ifikeleleke kuyo.
2. Xa uzama ukongeza imiyalezo emitsha okanye izinto kwifayile ye-PST, kwaye ngexesha lenkqubo yokongeza, ifayile ye-PST ifikelela okanye iya ngaphaya kwe-2GB, uya kufumana i-Outlook iyala nje ukwamkela nayiphi na idatha entsha ngaphandle kwezikhalazo, okanye uya kubona imiyalezo yemposiso, enje:
Ifayile ayinakongezwa kwifolda. Intshukumo ayinakugqitywa.
Umsebenzi 'weMicrosoft Exchange Server -Ukufumana' impazamo echaziweyo (0x8004060C): 'Impazamo engaziwayo 0x8004060C'
Ifayile ye-xxxx.pst ifikelele kubungakanani bayo obukhulu. Ukunciphisa inani ledatha kule fayile, khetha ezinye izinto ongasazifuniyo, emva koko uzisuse ngokusisigxina (shift + del) uzicime.
Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, iMicrosoft ayinayo indlela enokusombulula ingxaki ye-PST yefayile eyonelisayo. Esona sisombululo sisona siyimveliso yethu DataNumen Outlook Repair. Inokuphinda ifumane iifayile ze-PST ezinkulu ngaphandle kokulahleka kwedatha. Ukwenza oku, zimbini iindlela ezizezinye:
Ukuba une-Outlook 2003 okanye iinguqulelo eziphezulu ezifakwe kwikhompyuter yakho, unako Guqula ifayile yePST engaphezulu kwifomathi entsha ye-Outlook 2003 unicode, ongenawo umda we-2GB. Le yeyona ndlela ikhethwayo.
Ukuba awunayo i-Outlook 2003 okanye iinguqulelo eziphezulu, emva koko unako Yahlulahlula-hlula ifayile yePST kwiifayile ezincinci ezininzi. Ifayile nganye inenxalenye yedatha kwifayile yoqobo ye-PST, kodwa ingaphantsi kwe-2GB kwaye izimele kwezinye ukuze ukwazi ukufikelela kuyo ngokwahlukeneyo nge-Outlook 2002 okanye iinguqulelo ezisezantsi ngaphandle kwengxaki. Le ndlela ayinangxaki kangako njengoko kufuneka ulawule iifayile ze-PST ezininzi emva kokuqhekeka komsebenzi.